မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားပွဲ တည်းခိုဆောင် ၄ ဆောင်ကို တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ရာ ကြမ်းခင်းဈေးထက် ကျပ်သိန်?? - Yangon Media Group
မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားပွဲ တည်းခိုဆောင် ၄ ဆောင်ကို တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ရာ ကြမ်းခင်းဈေးထက် ကျပ်သိန်??
မင်းဘူး၊ ဇန်နဝါရီ ၁ဝ
မန်းရွှေ စက်တော်ဘုရားပွဲ တည်းခိုဆောင် ၈၄ ဆောင်ကို တင်ဒါချထားပေးခဲ့ရာတွင် ကြမ်းခင်းဈေးထက်ငွေ ကျပ်သိန်း ၁၅၂ဝ ကျော်ပိုရရှိခဲ့ ကြောင်း မန်းရွှေစက်တော်ဂေါပက အဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။ ”မန်းရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲ တည်းခိုဆောင် ၈၄ ဆောင်ကို ငွေကျပ်သိန်း ၃၇၄ဝ နဲ့ကြမ်းခင်း ဈေးသတ်မှတ်ခဲ့တာမှာ တင်ဒါရရှိ မှုကငွေကျပ်သိန်း ၅၂ဝဝ ကျော် ရရှိခဲ့တာကြောင့် ကြမ်းခင်းဈေး ထက် ငွေကျပ်သိန်း ၁၅၂ဝ ကျော်ပို ရရှိခဲ့တယ်”ဟု မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်း လှိုင်က ပြောကြားသည်။
ယခုနှစ်ဘုရားပွဲတော် အတွက်တင်ဒါဖွင့်ပွဲတွင် တည်းခို ဆောင်ပေါင်း ၁၁၃ ဆောင်ထဲမှ ၈၄ ဆောင်ကို တင်ဒါလျှောက်ထားသူ ၂၄၅ ဦးက တင်ဒါဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် တင်ဒါဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာများ တင်ခဲ့ကြပြီး တင်ဒါပေးရန်ကျန် နေသေးသည့် တည်းခိုဆောင် ၂၉ ဆောင်ကို Deposit ကျပ်သိန်း ၄ဝ ထပ်မံပေးသွင်းဖို့မလိုတော့ဘဲ လျှောက်လွှာအသစ်ကို ငွေကျပ် နှစ်သိန်းဖြင့် ဝယ်ယူပြီး ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်မှ ၉ ရက်အထိ မင်းဘူး ရွှေစက်တော်ဂေါပကရုံးတွင် လျှောက်ထားခဲ့ကြောင်း ဂေါပက အဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
တည်းခိုဆောင် ၈၄ ဆောင် အတွက်တင်ဒါဖွင့်ပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်က မင်းဘူးမြို့နယ် အထွေ ထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအစည်း အဝေးခန်းမ၌ကျင်းပရာ မန်းရွှေ စက်တော်နာယကအဖွဲ့ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရေးမှူး ဦး ဝေဇင်ထွန်း၊ တိုင်းဒေသကြီး လူမှု ရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာခင်မောင် အေး၊ ဂေါပကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းလှိုင်နှင့်ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်များ၊ လုပ် ငန်းရှင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တာချီလိတ်၌ ခိုးရာပါ ဆိုင်ကယ်များကို ပိုင်ရှင်များထံ ပြန်လည်ပေးအပ်
စိစစ်ပြီး ဘင်္ဂါလီ ၁ဝဝဝ ကျော်ကို အချိန်မရွေး ပြန်လက်ခံရန် အဆင်သင့်ရှိဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဆ
နျူကလီးယား ကင်းစင်ရေး ဆွေးနွေးရန် မြောက်ကိုရီးယား အသင့်ရှိ
အာလာဒင် ရုပ်ရှင်တွင် ပါဝင်ရခြင်းသည် ကျွမ်းကျင်မှုများကို အပြည့်အဝ အသုံးချနိုင်သည့် အခွင့်အ